🤍 အနံ့ အထိအတွေ့ အကျိုးအာနိသင် ပြည့်စုံစေတဲ့ New Skiin Lotion 🤍 သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့ နူးညံ့တဲ့ အထိအတွေ့ နဲ့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အကျိုးအာနိသင် ရရှိဖို့ဆိုရင် New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion သုံးပါ။ အရေပြားအတွင်းကို လွယ်ကူစွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး စေးကပ်ခြင်းမရှိဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြား နူးညံ့လာစေတဲ့ Skin Conditioner ပါဝင်တာကြောင့် နူးညံ့ချောမွတ်မှုကို ချက်ချင်းခံစားရစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်နှင့် အမဲစက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အရေပြားအမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပြီး Sensitive ဖြစ်တဲ့ အရေပြား အမျိုးအစားလည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
ထိရောက်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်နဲ့ ထိရောက်တဲ့ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု 🤍 ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေအတွက် ထိရောက်တဲ့ Body Lotion ကို လိုက်ရှာနေလား ❓ ထိရောက်တဲ့ အကျိုးအာနိသင်တွေနဲ့ သင့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေကို ထိထိရောက်ရောက် ထိန်းသိမ်းပေးမယ့် New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion ရှိတယ်လေ အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့အပြင် အာဟာရဓာတ်ကိုလည်း ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး ကျန်းမာနုပျိုစေပါတယ်။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကိုလည်း တားဆီးပေးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်နှင့် အမဲစက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အရေပြားဆဲလ်များ အသစ်ဖြစ်ပေါ်ြခင်းကို အားပေးပြီး နုပျိုဝင်းပ၊ တင်းရင်းစေပါတယ်။ New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ၃ ဆ ပေးစွမ်းမယ် ☺️ တောက်ပမှု ၃ ဆ ဘယ်လို Product မျိုးက သင့်ရဲ့ အသားအရေကို စိုပြေတောက်ပမှု အပေးစွမ်းနိုင်ဆုံးလဲ❓ Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion ကိုရွေးချယ်မယ်ဆိုရင် သင့်အသားအရေ တောက်ပမှုက ၂ ဆ မှ ၃ ဆ အထိ ခံစား ရရှိစေမှာပါ။ Better Skin Coffee Soap Scrub ရဲ့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Arabica Coffee Powder, အစွမ်းအထက်ဆုံး အာဖရိကမျိုးရင်း မန်ကျည်းအဆီအနှစ်နဲ့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး နနွင်းမြစ် တို့ပါဝင်လို့ အသားအရေမညီညာသူများ၊ အမဲစက် တင်းတိပ်နဲ့ ဝက်ခြံများ၊ အသားမာများ၊ အသားအရေ အမဲကွက်များနဲ့ ဂျွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion ရဲ့ Snail Mucus, Vita Collagen, Protein, Vitamins, Antioxidants တို့ က အသားအရေကို တင်းရင်းစေပြီး ကျန်းမာနုပျိုစေတယ်။ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းပေးတဲ့အပြင် အာဟာရဓာတ်ကိုလည်း ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ ဒီလို သိသာတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့် နေ့စဉ်တိုင်း Better Skin နဲ့ ရေချိုးပြီး New Skiin Lotion လေးလိမ်းဖို့ မမေ့နဲ့နော် ? Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
❄️ဟေမာန် ဆောင်းရာသီမှာ New Skiin ရှိရင် ပြည့်စုံပြီ ? မျက်နှာအတွက်လား ❓ ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လား ❓ ❄️ ဟေမာန် ဆောင်းရာသီမှာ လိုအပ်နေတဲ့ အစိုဓါတ်ကို ? Snail Mucus က ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်ပေးတယ်။ အရည်အသွေးမြင့် Vita Collagen ပါဝင်လို့ ရေရှည်သုံးမယ်ဆိုရင် အသားအရေလေး တင်းရင်းချောမွေ့ နုပျိုစေတယ်။ အဆင့်မြင့် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေက အရေပြားအိုမင်းတာကို ကာကွယ်ပေးပြီး နေလောင်ကွက်၊ အမဲစက်၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေကိုလည်း သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ သဘာဝထွက် ပစ္စည်းများနဲ့သာ ထုတ်လုပ်ထားလို့ Sensitive Skin များပါ သုံးလို့ရပါတယ်။ New Skiin Lotion မှာ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြား နူးညံ့လာစေတဲ့ Skin Conditioner ပါဝင်လို့ နူးညံ့ချောမွတ်မှုကို ချက်ချင်းခံစားရစေပါတယ်။ ☀️မနက်ရော ? ညရော မျက်နှာလေးကို Snail Wish Whitening Cream ဒါမှမဟုတ် New Skiin All In One Tone Up Cream လေး လိမ်းပေးပြီး ခန္ဓာကိုယ်ကို New Skiin Whitening Tone up Body Lotion ကို လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် ဆောင်းရာသီ တရာသီလုံးမှာ အသားအရေလေး စိုပြေလှနေစေပြီပေါ့ New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၃၁,၀၀၀ ကျပ်
☃️ ခြောက်သွေ့တဲ့ ဆောင်းလေကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှာ စိတ်မပူပါနဲ့ ? New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion အမြဲလိမ်းရင် ဆောင်းရာသီမှာ အသားအရေခြောက်ပြီး ပျက်စီးမှာကို ကြိုတင် စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးနော် ? အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး အစိုဓါတ်ထိန်းပေးတဲ့အပြင် အာဟာရဓာတ်ကိုလည်း ပြည့်ပြည့်ဝဝ ဖြည့်တင်းပေးတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်က တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက်နဲ့ အမဲစက်တွေကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ်။ အသားအရေ တင်းရင်းပြီး နုပျိုစေလို့ ရာသီဉတုကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှာကို လုံးဝလုံးဝ စိတ်မပူတာပေါ့ ? New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
? ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေ တင်းရင်းနုပျိုစေတဲ့ New Skiin Lotion ? New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion မှာ အသားအရေတင်းရင်းမှုအတွက် အဓိကလိုအပ်တဲ့ Vita Collagent ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် အရေအကြောင်းများကို သိသာစွာ ပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရေကို တင်းရင်းနုပျိုစေပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အရေပြား နူးညံ့လာစေတဲ့ Skin Conditioner ပါဝင်တာကြောင့် နူးညံ့ချောမွတ်မှုကို ချက်ချင်းခံစားရစေပါတယ်။ အရေပြားအမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ Sensitive ဖြစ်တဲ့ အရေပြား အမျိုးအစားလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
ဟိတ် New Skiin Lotion လေး လိမ်းပြီးပြီလား ❓ ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေ ကြည်လင်စိုပြေ နူးညံ့နေစေဖို့ New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion ကို ရေချိုးပြီးတိုင်း နေ့စဉ်ပုံမှန်လိမ်းပေးနော် ? New Skiin Lotion မှာ ပါဝင်တဲ့ ? Snail Mucus ကြောင့် အသားအရေလေး ကြည်လင်ပြီး စိုပြေနေစေပါတယ်။ Skin Conditioner ပါဝင်လို့ အသားအရေကို နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပါတယ်။ အရေပြား အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် သင့်တော်ပြီး Sensitive ဖြစ်တဲ့ အသားအရေအမျိုးအစားလဲ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Lotion ကို လိမ်းဖို့ မမေ့နဲ့နော် New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
အသားအရေအားလုံးကို နုပျိုလှပစေဖို့ ? New Skiin ? ရှိတယ်နော် မျက်နှာမှ ခြေဖျားအထိ အလှတရားတွေကို ဆုမတောင်းပဲ ဆုပြည့်ဝစေဖို့ ?Snail Wish Whitening Cream , ? New Skiin Cream နဲ့ ? New Skiin Body Lotion အခုပဲ သုံးနော် (၃) မျိုးစလုံးကို Formula တူညီစွာ ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ Lotion ကို ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေနှင့် သင့်တော်တဲ့ Skin Conditioner (အသားအရေကို နူးညံ့ပျော့ပြောင်းစေသော ပါဝင်ပစ္စည်း) ပြောင်းလဲ ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ ? ပါဝင်ပစ္စည်းများ ? Snail Mucus ? Vita Collagen ? Protein, Vitamins ? Antioxidants ? သိသာစေမယ့် အကျိုးကျေးဇူးများ ? အသားအရေကို အစိုဓါတ်ပြည့်ဝစွာဖြည့်တင်းပေးတယ် ? အသားအရေကို တင်းရင်းချောမွေ့ နုပျိုစေတယ် ? အရေပြားအိုမင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး နေလောင်ကွက်များ၊ အမဲစက်များနှင့် ဝက်ခြံအမာရွတ်များကိုပါ သက်သာပျောက်ကင်းစေတယ် အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ ? Paraben ? Mineral Oil ? Benzophenone ? Alcohol ? Phenoxyethanol ? Synthetic perfume များ လုံးဝ(လုံးဝ) မပါဝင်ပါ။ အသားအရေအမျိုးအစားအားလုံးအတွက်သင့်တော်ပြီး Sensitive Skin များပါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ New Skiin All In One Tone Up Cream (5 g) တစ်ထုပ် - ၃,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ် Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၂၉,၅၀၀ ကျပ်
အိမ်မှာနေရင်း Body လေးကို Skin Care မယ် ? ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားအရောင်မညီညာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အခုလို Stay Home အချိန်မှာ New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အသားအရေကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးပါပဲ New Skiin Body Lotion က အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတာတဲ့အပြင် အာဟာရဓာတ်ကိုလဲ ပြည့်ဝစွာ ဖြည့်တင်းပေးပါတယ်။ အသားအရေကိုလဲ တင်းရင်း ကျန်းမာနုပျိုစေပြီး အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးကါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ တင်းတိပ်၊ မှဲ့ခြောက် နှင့် အမဲစက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ All Skin Type အသုံးပြုနိုင်ပြီး Sensitive Skin တွေပါ သင့်တော်ပါတယ်။ အသုံးပြုပုံ မနက်တစ်ကြိမ် ညတစ်ကြိမ် Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ ရေချိုးပြီးတိုင်း ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့လိမ်းပေးပါ။ New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်